IDEA MAGAZINE: ခိုင်လုံသည့်အချက်အလက်များလုံးဝမတွေ့ရှိရသောကြောင့်
Posted by IDEA MAGAZINE
Sunday, April 26, 2009 at 7:15 PM
သူ ကျွန်မကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်
သူ ကျွန်မကို အော်ဟစ်နေတယ်”
၁၂ရက်အကြာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သူမသည် လွန်ကဲသောဆေးဝါးများကို သောက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားသည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့။ ဥပဒေရုံးမှ သူမသေဆုံးမှု(သို့)အသတ်ခံရမှုသည် လူတစ်ဦး(သို့) အများနှင့် ပတ်သက်နေသည်ဟု ယူဆကာ ပြန်လည်စစ်ဆေး။ ၄လတာမျှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ၎င်းအမှုကို တဖန်ပြန်လည်ပိတ်လိုက်ပြန်။
အရက်အလွန်အကျွံသောက်၊မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲကာ နေ့စဉ်စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ၊အမေရိကန်သမ္မတနှင့် မကြာ မကြာတွေ့ဆုံ။ သူမဟာ ဘယ်သူလဲ။
ကနေဒီပြောသလို ရယ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပဲလား။ ရောဂါဗေဒအကြံပေးချက်အရာရှိ အကြီးအကဲတစ်ဦးက တိကျသော ဆေးမှတ်တမ်းမူရင်း၏ တွေ့ရှိချက်များကို ထုတ်မေးလာ။ ယခုနှစ်အင်တာဗျူးတွင် သေမှုဆိုင်ရာ မြင်ကွင်း၏ ချို့ယွင်းအားနည်းချက် အနာအဆာ များကိုထုတ်ဖော်ညွှန်ပြခဲ့။ သူမဟာ ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်တာပဲ။
သူမ၏အခန်းတွင်းသို့ အခြားပုလင်းများ ဘယ်နေရာမှရောက်ရှိလာလေသလဲ။
ရှေ့နောက်မညီသော မှတ်တမ်းများ အိမ်တွင် တွေ့ရသော ဆေးဝါးအမျိုးမျုိးအစားစား။
ဓာတ်ခွဲခန်းမှထွက်လာသော အထောက်အထား စာရွက်ပေါ်တွင် ဆေးအမည်ရှစ်မျိုးထည့်ထားသည့် ပုလင်းများဟု ဖော်ပြခဲ့သည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ကိုယ့်အသားစ နမူနာကိုစစ်ဆေးရာမှ ထွက်လာသောာတစ်သျှူးကိုဘာလို့ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ချင်ကြတာလဲ
အနုမြူဗုံးများ အတွဲလိုက် ဖောက်ခွဲစမ်းသပ်မှုရှိပါလို့လား
အရွယ်ကောင်းဆဲ အမျိုးသားနဲ့ ရှန်ပိန်စုပ်လို့လား
မွန်ရိုးမှာ ဟုတ်ရဲ့လား၊ ဘယ်သူလဲ
တရားရုံးအနေဖြင့် ဘာလို့ အိမ်ထောင်အမျိုးသမီးကြီးကို ချန်ထားခဲ့တာလဲ။ လုံခြုံရေးပြဿနာ စီအဆင့်၊(ဃ)အမှတ်အသားလျို့ဝှက်သင်္ကေတ။ အနှစ်(၄၀)ကျော်ထိန်ချန်ထားသော အထူးလျို့ဝှက်ချက်များ။သောကပွားစေနိုင်သော ၎င်းတို့၏နောက်ကွယ်လိမ်ညာမှုများ။ ပြည်သူတို့ပြသခွင့် ကို မလုပ်နိုင်သောအဆင့်သတ်မှတ်ထား။ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ၁၀၀မျှရှိသော စာရွက်စာတမ်းများ။ စာမျက်နှာ ၅၀၀ခန့်အမှုကိစ္စဟာမွန်ရိုးနဲ့မှ ဆိုင် ရဲ့လား။
(အကြောင်းအရာများမှ အတ္ထုပ္ပတိရေးသူသမိုးပညာရှင်နဲ့သုတေသီများအတွက်သာဖြစ်၏။ စာရေးသူအလုပ်မဟုတ်။ပေ။ ဒါတွေကိုကိုယ်အာဘော် နဲ့ ကော်ချက်ဆွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ပေ)
မွန်ရိုးဟာ ဘယ်သူလဲ။ သမိုင်းဝင်ရုပ်ရှင်စတားလား၊နှုတ်ဖွာသူလား၊စိတ်ရောဂါသည်လား၊စပိုင်လား၊အာဂအမျိုးသမီးလား၊မလည်ရှုပ်လား၊ဟန်ဆောင်ကောင်းသူလား၊သရုပ် ဆောင်ကောင်းသူလား၊ဘ၀သရုပ်ဖော်မှာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းခဲ့သူလား။ ဘယ်သူလဲ၊မွန်ရိုးဟာ ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်သူလဲ မွန်ရိုး။
This entry was posted on 7:15 PM and is filed under idea poems-may'09 . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Filed under idea poems-may'09
idea ကို စာအုပ်နဲ့ဖတ်ချင်သူတွေအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံ city hall မှာ ဝယ်ယူလို့ရနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးပါတယ်။
Art Creation by Idea Magazine is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Australia License.
Based onawork at ideamagazine.blogspot.com.
အမှတ်၊ ၁၂၇ - ၄၃လမ်း
ဖုန်း - ၂၅၆၆၉၅၊ ၀၉၈၅၈၆၅၅၇
Mg Myo (TwoCats)
Thi Thi Lwin
Moe Min (Rays)
emotional essay (1)
essay type story - sept'09 (1)
idea 100th Issue (8)
idea august cover (1)
idea august issue 2010 (1)
idea cover collection-may'09 (1)
idea essay - june'09 (1)
idea essay - sept'09 (1)
idea fashion and artistics designs-april'09 (2)
idea fashion and artistics designs-may'09 (2)
idea july (1)
idea march issue 2010 (1)
idea october cover (1)
idea old pages (2)
idea poem corner - oct'09 (1)
idea poems - aug'09 (9)
idea poems - july'09 (9)
idea poems - june'09 (10)
idea poems - oct'09 (1)
idea poems - sept'09 (7)
idea poems-april'09 (8)
idea poems-may'09 (8)
idea short story - april'09 (2)
idea short story - aug'09 (3)
idea short story - july'09 (2)
idea short story - june'09 (3)
idea short story - may'09 (2)
idea short story - sept'09 (1)
idea story - 09 (1)
idea story - oct'09 (3)
idea story -sept'09 (1)
Magazine 2010 (1)
your idea - aug'09 (1)
your idea - idea 100 issue (1)
your idea - july'09 (1)
your idea - june'09 (1)
your idea - sept'09 (1)
your idea-april'09 (1)
your idea-may'09 (1)
Cover Girl and Cover Colloection
The Art of Beads in Artistics Texture
Copyright 2008 - IDEA MAGAZINE - is proudly powered by Blogger